Ajjeechaa Koriyaa Kaabaatiif addunyaan maaliif dhimmame? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Kim Hyok-chol ergamaa Koriyaa Kaabaa Ameerikaatti yoo ta'u gumii Tiraampii fi Kim kan Haanoi bara kanaarra ture
Kooriyaan Kaabaa ergamashee addaa damee nikulaaraa ajjeeftee jirti jedhame odeefamuu erga egalee asi dhugaasaa adda baafachuun rakkisaa ta'ee tureera.
Akka madeen jedhanitti garuu sababii marii dhimmicharratti Ameerikaafi Kooriyaa Kaabaa jidduutti taasifamuun bu'a qabeessa hin ta'iin hafeen wal qabata ergamicha ajjeeftee jirti jedhama.
Garuu sababiin gabaasa ajjeechaa qondaala Koriyaa Kaabaa kana of eegannoon itti ilaaluuf ni jiraata. Dubbicha adda baasuuf baayyee rakkisaa waan ta'eef sobas ta'u danda'a.
Keessattu qondaaltoota mootummaa 'ajjeefamniiru' jechuun gabaasuun ni ulfaata.
Hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Chaayinaa daawwachaa jiru
Kooriyaa Kaabaa baay'inni hiriyoota ishee ajaa'ibsiisaa dha
Aanga'aan Kooriyaa Kaabaa Kooriyaa Kibbaa daawwachuufi
Kana duraas osoo midiyaalee Kooriyaa Kaabaa hin hafiin qondaaltoota motummaa 'ajjeefamaniiru' jedhamanii turan odeeffannichi bahee osoo baayyee hinturiin Kim Jong-un waliin marii taasisuun mulataniiru.
Qondaala Kooriyaan kaabaa dhimma nikulaaraatiif Ameerikaatti bakka buuftee turte ajjeefamu isaa ilaalchisee gaazeeaaa Sooliitti argamu tokkotti madda tokkotu hime.
Marii Donaald Tiraamp, fi Kim Jong -un waliin taasisaniinturan irratti qondaalli kun hirmaatanii ture. Innis buufata xiyyaaraa Piyoonyaangi keessatti ajjeefamuu himame.
Maddi odiichaa akka jedhuutti qondaaliticha waliin ministiroonni dhiimma alaa biraa afurii ajjeefamaniiru.
Isaan hundinuu Ameerikaadhaaf basaastu jedhamuu fi osoo adeemsa Ameerikaa sirriitti hunhubatiin haalaa mari'atu dadhabdan jedhamuun himataman.
Gama biraatiin ammoo harka mirgaa ogganaa biyyattii ta'unsaa kan himamu kim Yoong Chaol, buufata boqannaa daangaa Chaayinaatti argamu keessa galfameera kan jedhu jira.
Qondaaltoonni marii Ameerikaafi Koriyaa Kaabaatiin harkisaan keessa jiru hundi battalumatti dhokfaman. Tarii jiddu gala sana galuunsaanii dhugaa ta'u mala.
Kim Jong-un mariin pirezidaantii Amerrikaa Tiraamp waliin tasisan abdii wayii mul'isuu hafuunsaa baayyee waan isaan aarseefu mana itti gaafatamaa taasisan barbaadu.
Kim Jong-un kana duras manoota ajjeesisuun saa ni beekama. Kana duras bara 2013tti eessumni oggantichaa Jaang Song Teck biyyaa haaluun himatamee ajjeefamunsaa ni yaadatama.
Ajjeechaan nama kanaas osoo Kooriyaan hin himiin guyyaa tokkoon dura tajaajilawwan tika Kooriyaa Kibbaatiin himamee ture.
Goodayyaa suuraa Pirezidaantii US Tiraamp fi Kim Yoong Chol Waxxabajjii bara 2018 Waayita Hawuu keettatti
Gaazexaan Siinmuun' jedhamuufi motummaan maxxanfamu tokko fuula ijoo dubbisaa irratti 'namoonni gocha farra warraaqsaa raawwata irratti waraaqsi ni murteessa'' mata duree jedhuun barreesse ture. Maan eenyu achirratti eeramu baatuus eergaansaa eenyuuf akka ta'e ifadha.
haa ta'u malees bara 2013tti waliftuun Haayon Song wul jedhamtu tokko ajjeefamushee gaazexaadhuma kanaan gabaafamulleen imala olompiikii gannaatiif gara Suluuttii taasifamee keessaa isheen argamtee jirti.
Amman tanas namoota olaanoo jedhamuun Kooriyaa Kaabaa keessatti beeaman keessaa tokko isheedha.
Bara 2016tti ammoo ittigaafatamaan loltootaa Rii Yoongi Giil malaamaltummaan shakkamuun ajjeefamunsaanii erga gabaafameen booda baatiiwwan muraasa keessatti aangoon dabalameef TV biyyattiin mulataniiru.
Taateewwan akkasii kanaafuu Kooriyaa Kaabaa keessatti namni ajjeefamusaatiif dhugaadha jedhame dubbachuun rakkisaa taasiseera.
Qondaaltoonni Tikaa Ameerikaa fi Saa'ol mr Kim Hyok chol dhuguma ajjeefameera yknis soba isa jedhu adda baafachuuf yaalaa jiru ta'ulleen hanga Piyoongyaangii ibsi kennamuutti afaan gutuun dubbachuun du'eera ykn jira jechuun rakkisaa dha jedhameera.
Waan ta'u malu hinbeekamu kaa!
Hogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong-un Chaayinaa daawwachaa jiru
Kooriyaan Kaabaa dursaan kabajaa biyyattii Kiim Yoongi-Naam gara Kooriyaa Kibbaatti erguuf